Binarium 2018 nyocha site na ezigbo ọnụọgụ abụọ nhọrọ ahịa
Isi > Nyocha banyere ndị na-ere ahịa > Nyocha Binarium na 2018
11.05.2018 · 1 · Ntinye niile maka Ka 2018
Ezigbo ndị enyi, ọganihu na-eto eto nke ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ anaghị ahapụ anyị ma ọ bụrụ na anyị mepee ọnụọgụ abụọ nke 2018 nyocha. Nke bụ eziokwu bụ na anyị na-enweta akwụkwọ ozi kwa ụbọchị na ajụjụ banyere onye na-ere ahia a, ma ọ ga-ekwe omume soro ya rụ ọrụ, ma enwere nsogbu ọ bụla na mwepụ. Anyị ga-aza ajụjụ ndị a site na nyochaa ezigbo ndị ahịa bụ ndị nyochaarịrị ọnụọgụ abụọ ọnụọgụ abụọ. Naanị ha nwere ike inye aka ozi mbụ.
Ịhọrọ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ bụ ihe dị mkpa maka onye ahịa. Mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa, ndị ahịa nwere ahụmahụ na-eji nnọọ ọtụtụ njirisi maka nyocha. Ma n'ahịa siri ike na-asọ asọmpi, ihe dị ka
ọnụ ego kacha nta;
ọnụ ọgụgụ nke akụ maka ahia;
ụzọ dịgasị iche iche ịbanye ma wepụ ego;
na ndị ọzọ dị oke mkpa nke ndị ndú ahịa bụ otu ọkwa. Na ebe a, ọ dị mkpa ka anyị nwee oke ihe dị otú a nke ndị na-ere ahịa enweghị ike imetụta ma n'otu oge ahụ ọ ga-egosi ọnọdụ n'ezie na mkpọsa. Na ọnọdụ a, ọnụọgụ abụọ Binarium 2018 bịara napụta anyị. Nanị na nyocha, ndị ahịa nwere ike ikwu eziokwu ma dee eziokwu banyere otú ha si zụlite mmekọrịta na otu onye na-ere ahịa. Na-adabere na nyocha ndị a, ndị ahịa ndị ọzọ ga-ekpebi ma ha ga-amalite ịrụ ọrụ na onye na-ere ahịa a ma nye ya ego ha.
Hapụ 2018 nyochaa ọnụọgụ abụọ na ibe Ndi ana-akpojiri ụdị nzaghachi ma ọ bụ adreesị ozi-e. Mgbe anyị nyochachara ma lelee nyochaa ọ ga-apụta na saịtị ahụ. Enwekwara ike ịhapụ ihe ndị ọzọ na ibe a. A na-edozi nkọwa iji ghara ịhapụ nyocha ndị na-eduhie eduhie.
Ntughari Binarium № 1
Sergey, 29 afọ, ụda ígwè, Izhevsk
Kemgbe ndụ m, m rọrọ nrọ ma rọọ nrọ banyere ọrụ dịka DJ, ma enwebeghị m ọchịchọ m. M na-arụ ọrụ nke ọma, mgbe ụfọdụ ana m egwuri egwu na klọb, ma ihe mgbaru ọsọ ndị a ka dị anya.
Otu oge m ga-egwuri egwu na ihe omume ebe ụda egwú mere ka m nwee nkụda mmụọ, ndị ọha na eze nọ n'ụzọ doro anya na ọ bụghị nke m. Nye m, ọ bụ naanị ọrụ. Ná ngwụsị nke afọ gara aga, amatara m ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na Binarium, malitere ịghọta isiokwu ahụ. Mgbe ọtụtụ ụbọchị azụ ahịa bara uru na akaụntụ nchịkwa, m kpebiri iwepụta ohere ma mee nkwụnye ego.
Emeela ka ihe dị mma site n'ụkpụrụ ego obodo anyị, nke m nwetara na ụlọ ọrụ New Year. Enwere m nchegbu na enwere nsogbu na nkwubi okwu. Ọbụna na akaụntụ ngosi m mepụtara m atụmatụ m, nke m jisiri ike nweta uru na ezigbo. Mgbe m chọrọ ego, enyekwara m iwu ịkwụ ụgwọ mbụ. Ụgwọ ahụ ruru n'echi ya - ọṅụ enweghị oke.
M na-aga n'ihu ịzụ ahịa ọnụọgụ abụọ, nke a anaghị egbochi m ịmara ihe m nwere ike ime. Agaghị m egwu "ọzọ," gịnị kpatara m ji achọ ọrụ dị otú ahụ na-arụpụta ọrụ mgbe enwere ọnụọgụ abụọ. Daalụ ọnụọgụ abụọ ọnụọgụ abụọ!
Gaa na saịtị nke onye na-ere ahia
Ntughari Binarium № 2
Marina, afọ 32, nwunye nwanyị, Mytishchi
Ndewo onye ọ bụla, abụ m nne nke ụmụ nwanyị mara mma abụọ. Enwere m ọzụzụ abụọ dị elu (akụ na ụba na njikwa ego), mana m họọrọ ọrụ nye ezinụlọ. Mgbe iwu mbụ ahụ gasịrị, agbalịrị m ịghara ịnọ n'ụlọ ruo ogologo oge, ma gbalịa ịmalite ịrụ ọrụ ngwa ngwa "na nwanne nne m." Ma mgbe m mụrụ nwa m nwanyị nke abụọ, achọpụtara m na ọ dịghị ihe dị mma karịa oge a na-eji ezinụlọ, yabụ m wee nye iwu, ebe m na-alọghachighị.
Dị ka ọtụtụ ndị nne, m na-achọ ọrụ oge-oge, ma amatara m nhọrọ nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Amaara m otú ego si azụ ahịa n'ahịa ahịa, ma ụdị ego a bụ nke nwere obi abụọ. Ọ gbanwere na efu, ịzụ ahịa nwere ike ịba uru nke ukwuu, ọ bụ naanị isi ihe ịhọrọ onye na-ere ahịa. Nye m ọ bụ binaryium, nke m bịara mgbe m nwetara ahụmahụ. Enwere afọ ojuju na ọnọdụ ọrụ, ọsọ nke ịkwụ ụgwọ, ọnụ ọnụ. Maka m, ahia aghọwo ihe na-akpata ego dị mma. Nke kachasị mkpa, enwere m ike ịbịaru nso na ezinụlọ m, anaghị m aghọta ndị na-ahọrọ ọrụ, ọ bụghị ndị ha hụrụ n'anya.
Ntughari Binarium № 3
Andrew, 43 afọ, njikwa, Nizhnevartovsk
Ana m arụ ọrụ n'ọfịs, ụlọ ọrụ anyị na-ere ahịa azụ ahịa. N'ọgba ahụ enwere nsogbu, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa, mkpokọta ahụ amalitela. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ ibe ha niile hapụrụ na ntinye aka nke ha, ụgwọ ọrụ ghọrọ naanị ịkwa emo. Ma maka ọrụ m, enwere ihe niile ị chọrọ - kọmputa na Intaneti. M ahia ọnụọgụ abụọ, m na-arụ ọrụ na ọnụọgụ abụọ ọnụọgụ abụọ.
Onye ọrụ ahụ gbalịrị "akụ", mana ọtụtụ ndị na-efe aka, ma ugbu a, ha na-arụ ọrụ, onye bụ ọkwọ ụgbọ ala, bụ onye gara ndị na-ere ahịa. Ma enwere m ezi ebe a, ahụmahụ ahụ ma wepụta ego maka ụgwọ ezumike nká, ma ka ọ dị ugbu a, m na-ebuli ego site na nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Binaryium bụ ụlọ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ana m akwado. Ọtụtụ ndị dị ugbu a, dịka a na-agbanye n'ọkụ, na-agbagharị maka ehihie na abalị maka pennies, mana enwere nsogbu nsogbu - mụta ịzụ ahịa, ị ga-enwe obi ụtọ.
Ntughari Binarium № 4
Boris, afọ 21, nwa akwụkwọ, St. Petersburg
Anọ m na-amụ na St. Petersburg, mana m onwe m si Priozersk. Ọrụ m bụ ego, ya mere, Chineke n'onwe ya nyere iwu ka a na-azụ ahịa. Achọpụtara m onwe m ọnụọgụ abụọ nhọrọ - ịzụ ahịa nkịtị, na ụbụrụ bụ mgbe niile, M na-enyocha eserese na ndị na-egosi, M na-ekwu na-emekọ. Ya mere, ọ na - emepụta ụzọ abụọ iji gbuo - na arụmọrụ nke ọma dị n'usoro, dịka n'isiokwu ahụ mgbe nile, ma site na nne na nna anaghị adabere, ana m enye onwe m. M ahia na brokers dị iche iche, e kpochapụrụ mmadụ, na mbụ ha kwụrụ ụgwọ, mgbe ahụ, "ezumike" malitere ma nyochaa ihe a na-apụghị ịghọta aghọta
Otu n'ime ndị na-eme ihe n'eziokwu, ebe m na-ere ahịa ọtụtụ ọnwa ugbu a - bụ ọnụọgụ abụọ. Ee, ụdị onye na-ere ahia, na uru na ụfọdụ ebe dị obere, ma ọ na-akwụ ụgwọ. Ma nke a bụ ihe kachasị mkpa, ọ bụghị ya? N'ozuzu, m na-ere ahịa na tournaments, ọ na-akpali mpi na ndị nyocha. Anaghị m ewere ebe mbụ, mana m na-abanye n'ọma ahịa ahụ. Ana m enwetakwa ihe nrite, ruo otu ụbọchị, nke kachasị abụọ. Ya mere, onye maara usoro ọnụọgụ abụọ, ọnụọgụ Binarium n'ụzọ doro anya na ntinye akwụkwọ mgbasa ozi. Ezigbo ihe niile!
Ntughari Binarium № 5
Anastasia, afọ 26, onye nyocha ego, Moscow
Malite site na ideghari, isiokwu maka ire ere na ịtụ. Enwetara m penny, mana m adaghị mbà. Nke nta nke nta chọtara niche kasị baa uru - ego. Akụkọ akụ na ụba, ọnụego mgbanwe ego, crypt, indexes, wdg. Amalitere m ịrụ ọrụ na nnukwu ọnụ ụzọ, ebe m na-ahụkwa nhọrọ ọnụọgụ abụọ, gụnyere. Iji mara ihe m ga-ede banyere ya, amalitere m ịmalite ịzụ ahịa na nhọrọ ọnụọgụ abụọ. E debara ya aha site na brokers dị iche iche, na-erekwa na akaụntụ ngosi.
Enwere m ike ịsị, ọtụtụ ndị na-agba ahia yiri nke ahụ, naanị aha dị iche. Iji "banye n'ime anụ" nke onye ahịa ahụ, ekpebiri m ịgbalị ịzụ ego. Achọpụtara m Binaryium, ọnụ, ma mụ onwe m, dị mfe. Emeela ka ego ahụ buru, na ọ bụghị ọmịiko ka ị ghara ịla n'iyi, uche gị kwukwara na ị nwere ego. Mgbe edere m akwụkwọ ahụ, ekpebiri m iwepụ ego m nwetara (ọ bụ ntakịrị ihe ọzọ, ebe ọ bụ na a na-agba ya mmiri n'ihi usoro ndị na-adịghị mma). N'otu ụbọchị ahụ, ego a kwụrụ na-ada na kaadị ahụ, obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ego dị mma iji rụọ ọrụ. N'inwe atụmatụ ịghọ onye nyocha nke oge niile nke ọnụ ụzọ ámá ahụ, soro onye nchịkwa kwurịta ihe a, echere m na ihe niile ga-apụ.
Ntughari Binarium № 6
Aivaz, 31 afọ, onye ọchụnta ego, Krasnodar
Ekwenyeghị m na nkwupụta ahụ bụ naanị otu okwu nwere ike ịga nke ọma. Enwere m ọtụtụ ebe nkwụnye ụgwọ - azụmahịa na ala, ọrụ ịntanetị, ịzụ ahịa. Enwere m ike ịkọ banyere nke ikpeazụ, na n'ozuzu banyere ọnụọgụ ọnụọgụ na ụlọ ọrụ ọnụọgụ abụọ.
Ọnụọgụ abụọ bụ ikpo okwu maka ndị mbido, ọ gaghị adabara ndị ahịa azụmaahịa. Nke bụ eziokwu bụ na enweghi ọtụtụ ngwá ọrụ ebe a, uru ahụ abụghị nke kachasị elu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụta otú ị ga-esi azụ ahịa, ị nwere ike iji ọnụọgụ abụọ dị ka ọkpụkpụ, echere m na ọ ga-adaba. Enwere ọzụzụ na ụlọ ahịa, ma ịnweta ya, ịkwesịrị ịmepụta ego dịkarịa ala nke 500 dollar. Enwere m ike ịbanye n'ime ụlọ a, dịka ọ dị, ihe bara uru, ma ọzọ, maka ndị ahịa malitere, n'onwe m amụtaghị m ihe ọhụrụ ọ bụla.
Ntughari Binarium № 7
Vyacheslav, ihe mgbaru ọsọ 33, onye na-arụ ọrụ na-enweghị isi, Chiang Mai (Thailand)
Ozugbo m bi na Siberia ma rụọ ọrụ n'otu ụlọ ahịa dị ka onye na-ere ahịa. Ana m echeta oge a dị ka ndụtụ ndụ ogologo oge. Ugbu a, m na-ebi na paradaịs n'ezie, ana m etinye aka na mmemme, gụnyere ịde bots ahịa. Dịka onye ọkachamara m nwere ike ịsị na enweghi uru bọọlụ, ị nwere ike ịtụkwasị anya na mmụba nke 10-15% kwa ọnwa, ekwela ka e jiri nkwa kwere nkwa 1000% nke uru na igwe zuru ezu. Ahịa dị mma karịa isi gị.
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ abụghị ihe ọhụrụ, ma ị ka nwere ike ịme ego na ha. M na-adụ gị ọdụ ka ịnwale ya na Binarium, ụlọ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ọrụ nke oge a. Mwepu ego nke ngwa ngwa bụ isi na ụlọ ọrụ ahụ. Na ihe eji enyere gi aka - ihe nile bu uzo, ego, ihe di iche iche na mkpuchi. Uru bụ 60-70%, ma e nwere akụ ebe 80% dị elu. Ọnụahịa ahụ nwere ihe ngosi niile dị mkpa, ị nwere ike ịzụ ahịa site na usoro dị iche iche. Ana m akwado ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ maka ndị ahịa nwere nkà dị iche iche - site na ịmalite ndị ọkachamara.
Ntughari Binarium № 8
Eugene, 38 afọ, ọkwọ ụgbọala, Samara
Na November afọ gara aga, ọnụọgụ abụọ enyeghị ego ego, m debara aha ma nata ya. Enwekwuo ụlọ akụ na 2 ugboro, ma enweghi ike iwepu ego, ọ pụtara na ị ga-ahapụrịrị onwe gị iji tie kaadị ahụ. Kedu ihe i nwere ike ime, dokin ha ha, ma ebe a dabara n'ọnyà - ọzọ enweghi ike iwepu ego, n'ihi na ọ dị mkpa iji mechie ọtụtụ azụmahịa. Aghaghị m ịzụ ahịa ọzọ, n'ihi ya, ụlọ akụ ahụ dị ntakịrị, ma anọ m na nwa. Ego weputara - batara n'otu ụbọchị, mana tupu nke ahụ, abụ m onye na-ekwesịghị ntụkwasị obi. N'ozuzu, ndụmọdụ m, kọwaa ihe niile dị n'ọdụ ụgbọ mmiri, nke mere ka e mesịrị, enweghị nghọtahie. Ọ bụrụ na arụ ọrụ nke ikpo okwu ikpe, ọ bụ ezigbo ahia ahia.
Ntughari Binarium № 9
Michael, 58 afọ, onye akwụ ụgwọ, Magnitogorsk
Afọ 35 na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ, n'ihi ya kwa, ụgwọ ezumike nká bụ nke na-ezughị ezu ịnọ naanị ya. Gaa laa ezumike nká ịrụ ọrụ maka penny? Ee e, ekele m. Ngọzi bụ Intanet, ma ọ bụrụ na enwerekwa ọchịchọ, ọ ga-ekwe omume ịchọta ụzọ ị ga-esi nweta ya. N'ebe ndị enyi m na-agwa ndị ọgbọ m okwu, ọ dịghị onye kwere, ha dị ka onye ara, ha onwe ha na-adị ndụ, ha na-ejikwa aka ịkatọ. Na afọ nke atọ abụwo m nhọrọ ịzụ ahịa, n'ụzọ. Aga m agwa gị banyere ọnụọgụ abụọ.
Oge mbụ m hụrụ onye na-ere ahịa 2 n'afọ gara aga. Ana m echeta ugbu a, mgbe ahụ, ụlọ ọrụ a emeghị ka obi sie gị ike, ọbụnadị enweghị ndekọ akaụntụ, na m na-ejikarị ya eme ihe ọhụrụ. Ekpebiri m iji ezi uche zere onye ahia a, ejighị ego m tụkwasị ya obi. Ma otu afọ ma ọ bụ ya mere, onye na-ere ahịa na-anọ n'ihu ọha, mgbe ọtụtụ ndị ọzọ mechiri. Ozi agafe na 2017, nke ọnụọgụ abụọ Binarium, gbakwunyere akaụntụ nchịkwa na ịkwụ ụgwọ ego.
Mgbe ahụ, ekpebiri m ịgbalị ịchọta ọnụọgụ abụọ na ọnụọgụ abụọ, ma amaliteghị m ọbụna na akaụntụ ndekọ ego, ma ozugbo m gara ego (ego nke 500 dollar). E nwere ngwa a kpọrọ ụlọ nke ndị ahịa, ngwá ọrụ na-adọrọ mmasị, nyere naanị ụgwọ, ọ bụghị ala.
Anyị na-aga n'ihu, na nkwubi okwu - nweta uru, ma wezuga ego ya, ugwo na 500 dollar bịara ngwa ngwa, ụbọchị mgbe o nyere ya iwu. Ọzọ, m na-aga n'ihu ahia maka uru, ugbua na a gbakwunyere, ruo mgbe ihe niile ruru. Nke a abụghịkwa mgbakwunye na ụgwọ ezumike nká gị, ọ bụ ezigbo ọla edo m, ebe ọ bụ ihe niile dị n'ihu, ị gaghị emebi ahụ ike gị na ụlọ ọrụ ahụ.
Ntughari Binarium № 10
Christina, 24, onye mmebe, Kirov
Amakwaara m banyere nhọrọ ndị binaryium na-adịbeghị anya. Ọ na-amụ ihe ọmụmụ vidio nke Nadezhda Ereminoy, ọ na-azụkarị na vidio ya na Binarium. M ahia mbụ na akaụntụ ngosi, kpebiri iji ohere na nkwụnye ego. Enyere m ego, mana amaghị m na ọ ga-emerịrị azụ. N'ihi ya, enwere m ụlọ akụ n'ókèala dị mma, mana enweghị m ike ịdọrọ, m ka ga-azụ ahịa. N'ebe a, ọ bụ obere oge, ọ ga-abụrịrị na ịchụ nta ego ka ọ na-ewepụ ego. Na ịzụ ahịa dị nnọọ mfe ma dị mfe, mmemme na-emeghe ngwa ngwa, arụmọrụ ahịa na ọnụ dị elu, ma ọ bụrụ na ị maara otú e si azụ ahịa. Anaghị m ewere onwe m onye ọkachamara, mana m dị mma na ya, echere m na ị ga-enwekwa ọganihu.
Ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nke 2018
Ihe ndị ọzọ si na ụdị "Broker Nyocha"
Binomo nyochaa 20185 (100%) 9 votes ...
Esi họrọ otu onye na - agba ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ - naanị njirimara dị mkpa
Kedu otu esi ahọrọ ọnụọgụ ego ọnụọgụ ...
21.12.2016 · 4
Finmax ore ahia nke ọnụọgụ abụọ nhọrọ reviews nke ezigbo ahịa
Finmax ore ahia ọnụọgụ abụọ nhọrọ reviews ...
IQ nhọrọ reviews
IQ nhọrọ reviewsRate nke a post ...
01.06.2016 · 92
Binomo na-agba alụkwaghịm ma ọ bụ na ọ bụghị?
Binomo na-agba ịgba alụkwaghịm ma ọ bụ na ọ bụghị? 4.2 (83.3%) 103 ...
Ị ghaghị ịghọta na ịrụ ọrụ na nhọrọ ọnụọgụ abụọ dị ka ezigbo ọrụ! N'ebe a, anyị chọrọ nkà!
Na dika ọrụ ọ bụla - ọ ga - ewetara gị ezigbo uru!
Ma, ị ga - echeta - nke a abụghị naanị ọrụ, nke a bụ ọnụọgụ abụọ! Taa, ọ bụ Binomo.
Ntụle bụ isi na 22 October
Oro ego nke Olympus dị ezigbo mkpa maka afọ 2016